5 သင်ကဥရောပမှာတော့မီးရထားအကြောင်းသိထားသင့်အံ့သြစရာအချက်အလက် | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ဥရောပခရီးသွား >5သင်ကဥရောပမှာတော့မီးရထားအကြောင်းသိထားသင့်အံ့သြစရာအချက်အလက်
စာဖတ်ချိန်:3မိနစ်များ(နောက်ဆုံးတွင်နောက်ဆုံးရေးသားချိန်: 06/11/2020)
ဥရောပ၌ရထားကြီးမားတဲ့အရာများမှာ; ငါတို့သည်ငါတို့၏သံလမ်းကိုချစ်, ကျနော်တို့ကိုအခြားကျော်သူတို့အားရှေးခယျြပါလိမ့်မယ် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအမျိုးအစား အချိန်မရွေး. အပြင်လျင်မြန်အတွက်အမှတ် A ကနေအမှတ် B ကိုမှရတဲ့အနေဖြင့်, အဆင်ပြေခြင်းနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသောထုံးစံ, သငျသညျအများစုပင်အကြောင်းကိုမီးရထားသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးသတိထားဤမျှလောက်ရှိနေကြသည်မဟုတ်ရဲ့. ကြောင်းမှတ်စုတွင်, ကျနော်တို့အထဲက singling နေ ဥရောပ၌ရထားအကြောင်းကိုအနည်းငယ်အံ့သြစရာဖြစ်ရပ်မှန်များ သငျသညျယခုတိုင်အောင်တက်သတိပြုမိခဲ့ကြပြီမဟုတ်:
ဥရောပ၌ရထား Environmental Friendly Are
ကျွန်ုပ်တို့၏မိခင်သဘာဝနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏စီစဉ်သူကိုအစဉ်အမြဲရှင်သန်နိုင်ရန်ကူညီရန်ရှာဖွေနေသည့်သတိရှိသူအားလုံးကိုကြွေးကြော်ပါ: သင်လေယာဉ်ဒါမှမဟုတ်ဘတ်စ်ကားလက်မှတ်အစားရထားလက်မှတ်ဝယ်လျှင်, သငျတို့သ့လုပ်နေပါလိမ့်မယ်. ကျနော်တို့အထဲကရှာတွေ့သည့်အတိုင်း, "မြန်နှုန်းမြင့်ရထားအကျိုးရှိစွာပိုပြီးစွမ်းအင်ဒီဟာက 3x နေကြတယ် "ဒေသဆိုင်ရာရထားထက်, "ပင်အနှေးဆုံးစဉ် ရထားဖြစ်ပါသည် 20% ကားတစ်စီးထက်ပိုထိရောက်". မညျသို့ကြောက်မက်ဘွယ်ဖြစ်?
မီးရထားခရီးသွားလာ ဥရောပတိုက်တွင်အကြီးအကျယ်ဖြစ်ပါသည်, ငါတို့သည်လည်းမကြာမီမည်သည့်အချိန်ပြောင်းလဲနေတဲ့မည်မဟုတ်ပါတဲ့ခံစားမှုရရှိပါသည်. ရထားဥရောပတိုက်သားတို့တှငျအဖြစ်လူကြိုက်များဘာလို့အနည်းငယ်အကြောင်းပြချက်ရှိပါတယ်, နှင့်ထိုသူအပေါင်းတို့သည်များမှာ 100% legit: သူတို့စူပါအမြန်များမှာ, ကုန်ကျစရိတ်-ထိရောက်သော, နှင့်ဖြစ်နိုင်သမျှတိုင်းလမ်းအတွက်အဆင်ပြေ. Plus အား, Trains in Europe rides are တစ်ဦးစစ်မှန် ခရီးသွားအတွေ့အကြုံကို, မြေတပြင်လုံးအရာမှဖွင့်အခြားဆုကြေးငွေအရာဖြစ်ပါသည်!
ရထားခရီးသွားတစ်ဦးဟိုတယ်အခန်းတွင်သင်ကငွေကို Save နိုင်သလား
စောင့်, ဘာ? ဟုတ်ကဲ့, အဲဒါအမှန်ပါပဲ! "ဟုခေါ်တစ်ခုခုရှိနေသော်ငြားလည်းဥရောပ၌နေ့ချင်းညချင်းရထားကျော်ဖြုန်းသော "ခရီးသွားများအတွက် 10 အမှတ် B ကိုမှအမှတ် A ကနေရထားပေါ်တွင်နာရီဥရောပတစ်နေ့ချင်းညချင်းရထားအတွက်စီးနင်း၏အကျိုးကျေးဇူးကိုခံစားနိုင်ပြီး ပိုက်ဆံချွေတာ ဟိုတယ်အခန်းတစ်ခန်းအပေါ်. နေ့ချင်းညချင်းရထား "အတွင်းကမ်းလှမ်းခဲ့သည်နေရာထိုင်ခင်းအမျိုးအစားပေါင်းမြောက်များစွာရှိပါတယ်," လူတိုင်းရဲ့နယ်လှည့်ဦးစားပေး fit မှဒီဇိုင်းရေးဆွဲ နှင့်၎င်းတို့၏ဘတ်ဂျက်. ဒါကြောင့်, ကျနော်တို့ရရှိပါသည်:
သင်တစ်ဦးရှည်လျားသောကာလအတွက်ခရီးသွားလာလျှင်သင်ကလျှော့စျေး Get ရနိုင်ပါသလားရထား Pass ကိုနှင့်အတူဥရောပ၌လေ့
Nope, you’re not dreaming – for the most part, ရထားလမ်း 'passes တူသောအသေးစားလက်ဆောင်တွေမှတစုံတခုဖြစ်နိုင်သည့်ဆုကြေးငွေအတူပါလာ လှေစီး နှင့်ဟိုတယ်နှင့်အထူးလျှော့စျေးဘတ်စ်ကားသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး လမ်းလျှောက်ခရီးများ. တခါတလေ, သင်ပင်ဆုလာဘ်ကိုသင်အခမဲ့အပါအဝင်လုံးဝအခမဲ့လှုပ်ရှားမှုများရာပူဇော်သက္ကာကိုရနိုင် မြစ် cruises, အစားအစာများ, နှင့်အလားတူ.
သငျသညျအများအားဖြင့်သူများသည် Baggage အခကြေးငွေများနှုတ်ဆက်ပါတယ် Kiss နိုင်သလား
တစ်ခုမှာ အကြီးမြတ်ဆုံး မီးရထားခရီးသွားလာအကြောင်းကိုအမှုအရာ စစ်မှန်တဲ့ဖြစ်လုနီးပါးလည်းကောင်းသောအသံ. Ummm, ထိုသို့စောင့်ဆိုင်း, yeap, သင်ကမှန်းဆင့်: ဥရောပတိုက်တွင်အများဆုံးရထားအိတ်ကိုအခကြေးငွေပေးစရာမလိုပါ! သေချာတာပေါ့, သင်ရထားခရီးသွားလာကြသောအခါမစစ်ဆေးခြင်းကိုရှိပါတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုကြောင့်ဖြစ်ပါသည်, အဓိပ္ပာယ် - သင်ရှိသည် သင့်ရဲ့တစျခုလုံးကိုအိတ်သယ်ဆောင် မင်းနဲ့အတူ. တချို့ခရီးသွားလေ့ကျင့်ဖို့အဆင်မပြေတာကြောင့်ဒီကိုမြင်ရလိမ့်မယ်နေစဉ်, ကျွန်တော်အထင်ကြီးရှာတွေ့: အနည်းဆုံးကျွန်ုပ်တို့အလင်းခရီးသွားလာပါလိမ့်မယ်ကိုသိ, မှန်သော? Plus အား, တစ်အိတ်ကိုလှည်းအိတ်ကောင်းတစ်ခုသဘောတူညီမှုပို့ဆောင်ကြသူခရီးသည်ကိုကူညီတစ်နေရာရာမှာအမြဲရှိ, ဒါကြောင့်အထဲကခွဲထားခဲ့သည်ရဲ့.
သငျသညျရထားသွားလာဖြစ်စေမအကြောင်းကိုဒုတိယအတှေးအရှိခြင်းဖြစ်ကြောင်းနောက်တစ်ကြိမ် - ငါတို့သည်အဖြေကိုတော်တော်လေးရှင်းပါတယ်ထင် ... မ? ကိုသွားပါ Save-A-ရထား ၌သင်တို့၏ဦးတည်ရာစာအုပ်ဆိုင်3မိနစ်များ, obnoxious ဘွတ်ကင်အခကြေးငွေများစျေးအသက်သာဆုံးနှုန်းထားနှင့်စိတ်သက်သာရာမှာ!
သင်သည်သင်၏ site ကိုပေါ်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘလော့ဂ်ပို့စ် embed လုပ်ဖို့ချင်ပါနဲ့, ထို့နောက်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ: https://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/5-surprising-facts-you-should-know-about-trains-in-europe-fun-times/ - (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အောက်ကိုဆင်း)
သင်သည်သင်၏အသုံးပြုသူများမျိုးဖြစ်လိုလျှင်, သင်တို့သည်ငါတို့၏ရှာဖွေရေးစာမျက်နှာများသို့တိုက်ရိုက်သူတို့ကိုပဲ့ပြင်နိုင်ပါတယ်. ဒီလင့်ခ်, သင်တို့သည်ငါတို့၏လူကြိုက်အများဆုံးမီးရထားလမ်းကြောင်းများရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ် – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. သငျသညျအင်္ဂလိပ်ဆင်းသက်စာမျက်နှာများတွင်ဘို့ငါတို့လင့်များရှိအတွင်းပိုင်း, ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့လည်းရှိ https://www.saveatrain.com/es_routes_sitemap.xml, သငျတို့သ / က de သို့မဟုတ် / ru နှင့်ပိုပြီးဘာသာစကားများဖို့ / es ပြောင်းလဲနိုင်သည်.
europetravel eurotrip ရထားအကြံပေးချက်များ ရထားခရီးသွား